Mana Oromoo Swiss: Hoga Ekeera Gaara Suufii
Yoo lola bu'an malee
Garaa gootaa hin arganii
Yaa Suufii mandhe booree
Gumaan qomoo diroof seera!
Mi'eessoon tuulaan reefaa
Hogaa tokkummaan ture
Dhibbee sirna gabrummaa
Bilisaaf du'uun eebbaa
Balaatu bu'ee bakakaa
Yaa lammii walii labsaa
Maanguddoo fi Xobbee ofii
Dhumiinsa gaaraa suufii
Guumaan bilisaan baatii
Bilisni qabsoon dhuftii
Yaa lammii booree godhaa
Seenaa kana hubadhaa.
posted by Mana Oromoo Swiss @ 2:00 PM 4 comments
Bidda tuttuqaatu aarsaa
Gumaa lammiitu baasaa
Yaa odaa hundeen guddaa
Yaa Waaqa abbaa hundaa
Mee kana quba qabdaa?
Yenaa lammiin qalamu
Garuu namni namumaa
Mee keenya kun maalumaa?
Daa'ima xobbee ijoollee
Mee maal godhan yoo ilaalle.
Yaa waaq ati dubbadhu
Yaadache ati hubadhuu
Yaa lammii seexaa godhu
Kanaa kan waa nuuf godhu.
Dhiigni lammii qulqulluu haa iyyatu!
Yaa ilmaan Oromoo walitti iyyuu duwwaa otoo hin taane, Iyya keenya addunyaa dhageesifachuun akka addunyaan dhugaa nuti qabnuu fi rakkoo uummanni keeya keessa jiru hubachiisuu irratti daran hojjechuu qabna.